Nandrolone ntụ ntụ (434-22-0) hplc ma98% | Azu na-emepụta ihe ntụpọ
/ ngwaahịa / Anabolics Steroids / Nandrolone ntụ ntụ Usoro / Nandrolone ntụ ntụ
3.50 si 5 dabere na 2 ahịa Fim
SKU: 434-22-0. Categories: Nandrolone ntụ ntụ Usoro, Anabolics Steroids
AASraw nwere njikọ na mmepụta ikike site na gram ka usoro nchịkọta nke Nandrolone ntụ ntụ (434-22-0), n'okpuru ụkpụrụ CGMP na usoro nlekọta njikwa.
Nandrolone ntụ ntụ video
Nandrolone ntụ ntụ Characters
aha: Nandrolone ntụ ntụ
Molekụla Formula: C18H26O2
Ọbara arọ: 274.4g
Nandrolone uzuzu ojiji na steroid steroid
Deca-Durabolin bu aha ahia na aha ahia maka uzo uzo Nandrolone. N'ụzọ doro anya, Deca-Durabolin bụ aha ahia maka Nandrolone raw powder Decanoate.
Nandrolone raw ntụ ntụ Usage
Nandrolone raw ntụ ntụ bụ anabolic steroid. Ọ na-arụ ọrụ site na ịbawanye uto nke ụfọdụ anụ ahụ n'ime ahụ ma gosipụta ka ọ dịkwuo ike ịnweta ọbara nke ọbara site na hemoglobin na-arịwanye elu na ọtụtụ ọbara ọbara uhie.
Ịdọ aka ná ntị na Nandrolone ntụ ntụ
Emela Nandrolone ntụ ntụ ma ọ bụrụ na:
ị nwere ihe na-afụ ụfụ ọ bụla na Nandrolone raw powder
ị dị ime ma ọ bụ ime atụmatụ ịtụrụ ime
ị nwere ọrịa cancer prostate ma ọ bụ ọrịa cancer ara, ọrịa ara ure na nnukwu ọkwa calcium, ma ọ bụ mmebi akụrụ
Kpọtụrụ onye dọkịta gị ma ọ bụ onye nlekọta ahụike ozugbo ma ọ bụrụ na nke ọ bụla n'ime ha na-emetụta gị.
Nandrolone ntụ ntụ nwere ike ime ka ụbụrụ imeju ma ọ bụ ọbara ọbara dị n'ime imeju ya. Ọ bụrụ na ha emee, ha ga-agarịrị mgbe ị kwụsịrị ịnweta Nandrolone raw ntụ ntụ. Otú ọ dị, ị nwere ike ọ gaghị ama na ị nwere otu n'ime ụbụrụ ndị a ma ọ bụ cysts ruo mgbe o siri ike, ikekwe ọbara ọgbụgba na-egbu mmadụ n'ime afọ.
Nandrolone raw ntụ ntụ pụkwara ime ka ọnụ ala cholesterol dị mma (HDL) na mmụba nke cholesterol ọjọọ (LDL). Mgbanwe ndị a na cholesterol nwere ike ịdị njọ ma nwee ike ịbawanye uru ị nwere ike ịmepụta hardening nke akwara na ọrịa obi.
Nandrolone Raw ntụ ntụ
Nandrolone ntụ ntụ Marketing
Esi zụta Nandrolone ntụ ntụ si AASraw
Nandrolone Raw ntụ ntụ Ezi ntụziaka: